Otu esi echefu ozi email na Gmail
Email & Izi ozi Gmail Atụmatụ & Aghụghọ
Mụta ụzọ ziri ezi iji wepụ Email na Gmail
Tinye nkwụsị izipu na Gmail iji nwee oge iji mee ka ọ ghara ikwenye
Ndi ị zitere ozi na Sam W. kama Sam G.? O nwere ike ọ gaghị abụ akaha iji weghachi ya. Ọ bụrụ na ị na-eji Gmail na weebụ ma ọ bụ site na ngwa ngwa mobile, ị nwere ike ikwusa ozi ị zitere ma ọ bụrụ na ị na-aga ngwa ngwa.
Enwere ike ịtọ Gmail ka ọ kwụsịtụ ruo 30 sekọnd tupu ọ na-ezipụ ozi ịntanetị gị mgbe ị pịa Send. Ị nwere ike icheta email ma weghachite n'aka ndị na-enweta ụgha, mmejọ okwu mkparị , okwu na-adịghị mma, na echefu echefu .
Ịnwere ike ịnweta ozi ịntanetị ezighi ezi ma ọ bụrụ na i meela ka Ebube Send feature, nke a na-agbanyeghị na ndabara.
Kwado Igosipụta Mmetụta na Gmail na Weebụ
Iji Gmail na-ebu oge ezipụ ozi zitere maka sekọnd ole na ole ka ịnwere ike weghachite ha:
Pịa Gear Ntọala na Gmail.
Họrọ Ntọala site na menu nke gosipụtara.
Gaa na General taabụ.
Na Ngalaba ezipụ wepụ, tinye nlele na-esote Kwado ezipu Send .
Họrọ nọmba nke sekọnd Gmail kwesịrị ịkwụsị tupu izipu ozi ịntanetị. Nhọrọ ndị dị site na 5 ruo 30 sekọnd.
Pịa Save Mgbanwe .
Mgbe i mechara mee ka njirimara Send Send na Gmail , ị nwere ike weghachite email ozugbo i zipụrụ ya. Ozugbo ị ghọtara na ị dị mkpa ịme mgbanwe maka ozi ezitere gị, ị nwere ụzọ dị iche iche iji cheta ya:
Pịa Wepu na ozi nke gosipụtara n'elu Gmail ihuenyo na-esote Ozi gị eziterela mgbe i zipụrụ ozi. Ị ga-ahụ nkwenye na-egosi na ekwusara ozi na mpaghara ahụ ma ọ bụrụ na ị pịa Wepụ n'ime oge ị setịpụrụ. Ọ bụrụ na ị hụghị nkwenye na ozi ahụ emeghị, ị nwere ike ọ gaghị ejide ozi ọpụpụ n'oge. Ọ bụrụ na ị maghị, lee na nchekwa Gmail Sent Mail. Ọ bụrụ na ọ dị ebe ahụ, ezitere email ahụ.
Pịa igodo Z na keyboard gị ngwa ngwa mgbe ị zipụrụ ozi ma chọpụta na ịchọrọ ịkwụsị nnyefe ya. Otu ezipụ nkwenye ahụ egosiputaghi na egosiputa na ihuenyo Gmail, mana ị gaghị achọ ime ihe ọ bụla ọzọ. Maka na ịchọrọ ịchọrọ ozi na ihuenyo gị ma mee ka gị kọọtị ya, nke ụzọ abụọ, nke a bụ ụzọ kachasị mfe iji ụdị atụmatụ Unsend, nke-na-eche na ị nwere nanị 30 sekọnd-pụtara ya bụ ụzọ kacha mma.
Mee mgbanwe ma ọ bụ mgbakwunye ọ bụla ịchọrọ iji zipu ya.
Otu esi echefu ozi-e na Gmail Mobile App
Iji mee ka email ghara imeta ozugbo i zipụrụ ya site na ngwa ngwa Gmail maka ngwa iOS ma ọ bụ ngwaọrụ mkpanaka, ngwa ngwa kpatụ Wepụ na ala nke ihuenyo ahụ. Ị ga-ahụ ozi nkwụsị , ma email gị gosipụtara onscreen ebe ị nwere ike idozi ma ọ bụ mgbakwunye na ya tupu iziga ya ọzọ. Ọ bụrụ na ịnweghị izigaghachi ya ma pịa akụ ka ịlaghachi na igbe mbata gị, ị ga-ahụ ozi Zọpụtara Zipu na ala nke ihuenyo na nhọrọ iji wepụ ya. Ozi na-egosiputa maka naanị sekọnd.
Otu esi eji Gmail Keyboard Shortcuts
Otu esi enweta Gmail ọzọ karia site na HTTPS
Uzo esi abanye na Gmail site na ozi ndi ozo
Otu esi zipu foto na Gmail
Otu esi akọwa njirimara nke Gmail nke gi onwe gi
Gmail Notifier 0.5.6 - Mgbati Firefox
Nweta akaụntụ Gmail na Eudora
Mụta otu esi echekwa ozi Email, Ndị ana-akpọ, na ndị ọzọ data
Otu esi atụ aro akụkụ maka ozi Outlook (Outlook.com)
Zen Pinball 2: Egwuregwu Mac nke Mac
Ndi akppo gi karia na ala ma o bu n'enye ndi mmadu?
Ụzọ ise iji nata Audio Site na Blu-ray Disc Player
Otu esi achọpụta ụdị Njikwa nke Njikwa Iji Linux
Gịnị Bụ 'Ọkụ'?
Zụlite Ekekọrịta Ezinụlọ maka IPhone na ITunes
Otu esi eme ka iko na Maya na echiche uche
Netstat - Iwu Linux - iwu Unix
Otu esi gbanyụọ mkparịta ụka nzipu ozi na Thunderbird
Kedu ka m ga-esi wepụ paswọọdụ Windows m?
Ụzọ dị mfe iji nweta Zoho Mail na ihe ọ bụla Email Program
10 Atụmatụ maka ederede Web
Ihe nchebe ihuenyo kacha mma 8 kacha mma ịzụta na 2018
Esi edozi ma ọ bụ dochie Boot.ini na Windows XP
AAC Plus Format: Gịnị Ka A Na-eji Eme Ihe?
Kedu ihe okwu okwu kwadoro?
Ihe niile gbasara mpempe akwụkwọ mpempe akwụkwọ
Kedu Ihe Na-eme Ka A Cell ekwentị?
Linux / Unix Iwu: uniq